Ubani Okufanele Akhokhe Lapho kwi Usuku Lokuqala - Iseluleko Okwabesilisa
Abantu babe zonke izinhlobo hang-ups uma kuziwa endabeni yokuqomisana, futhi mhlawumbe omunye ezivame kakhulu Ingabe uzizwa ucindezelekile noma ezingakhi nikhuluma ngendaba yokukhokhela usuku. Amadoda basabela kulesi ukucindezeleka. Amanye amadoda ukhokhe njalo, kodwa bazizwa negative ngasese ngaphakathi ngenkathi ubhala isheke. Amanye amadoda ziphikelela ukukhokha nesigamu futhi amanye amadoda kukhona plain angry ngakho. Amanye nje ngobuqotho besaba okubonakala elidala usuphelelwe uma banikela ukukhokha bill.
Ngiyazi amadoda ngeke nje flat out senqabe ukukhokhela in full ngosuku lokuqala, kunalokho kwelokuthi Bill kufanele kuhlukana ncamashi ngesigamu. Kungani? Ngoba ngaba nokuhlangenwe nakho okuningi kangaka ukukhokha i date ezibizayo nowesifazane kuphela akuzwe kuye aphinde. Mhlawumbe nawe uke waba lokhu kwenzeke kuwe. Mhlawumbe kwaba owesifazane wena wayethanda futhi wacabanga obukade vibing nge, ngakho wathi uzokhokhela, kuphela ukuba wakhe luzophela futhi ungalokothi ukubuyela izingcingo zakho. Noma mhlawumbe uye wakhokha for dates esabekayo eziningana mediocre noma darned right futhi bacasuke. Konke cash kungachithwa kanzima. Futhi ngithola ukuthi mina ngempela. Ubani ongeke uzizwe sore!
Kulezi zikhathi of ukulingana kungani kufanele umuntu kulindeleke ukuba onyaweni yonke izindleko bill nje ngoba umuntu? Abesifazane bafuna ukulingana, kahle nakhu.
Ake nginitshele imfihlo kancane. Uma lokhu wena, futhi wena ukulwela isigamu wakhe ukukhokha ngosuku lokuqala, lokhu kuyokwenza okwesabisa away yimuphi izinga okuhle owesifazane feminine. You bheka I ukufundisa abesifazane zami amaklayenti ukuba amandla abo njengabesifazane emhlabeni madoda bathi usukela, kuyasebenza kangcono ngaleyo ndlela. Lokhu kusho ukwamukela kamnandi futhi sivumele umuntu ukuba romance yakhe. Awukwazi kokubili kube energy yakho wesilisa, kungenjalo romance ngeke uchume. Kungaba more like nithandana oshade naye umhlabeleli, ngokusobala KUNGABA ukukhokha ingxenye bill. Ngakho lapho Ngiyaqonda ukukhungatheka kwakho, I kakhulu batusa senza into gentlemanly nokumnika ukukhokhela. Owesifazane izinga bayokwazisa ngempela ngoba.
Futhi musa nje ukukwenza nabesifazane oyithandayo. Nikelani ukukhokha on ZONKE usuku. Ngaphandle kweqiniso lokuthi lokhu ifomu nje emangalisayo okuhle futhi imikhuba emihle, yonke ubukele futhi wenza isenzo esihle. It ngeke engabonwa ngeke uhambe.
Ngake ngosuku owawuphuma kahle ngempela. Kodwa ekupheleni empeleni guy wakhipha wokubala ukuba bahlukane umthethosivivinywa ncamashi ngokusho ababenolwazi yini ukuba badle baphuze (kahle Ngicabanga ukuthi wokubala efonini yakhe kodwa namanje). Lapho nje lokhu kwenzeka ngazizwa yonke ukukhangana I ngaphambili ukuzizwa abakhwabanisi ilungelo out of me. HEWU! Ngangingahlali Ticabange nomuntu ofana lokhu – Uma ufana manje nje ukuthi kungaba njani ukuphila ngayo! Ungacabanga shopping in Ikea ifenisha? Kuthiwani on my lokuzalwa, ngabe kumele akhokhe uhhafu ke too? Not romantic kakhulu.
Gwema ekubeni jaded mayelana nokukhokha nje ngokuba beneme ngakho. In the rough and Tumble of dating, abanye besifazane wena uthathe uzonyamalala futhi angabuyeli izingcingo zakho. Kuyinto par for the course. I ukugembula seniyenzile okufanayo umuntu endaweni ethile agudle uma qotho ngokwakho. Nokho, lapho lady yakho ifika kanye, futhi wena ukumenza azizwe ekhethekile futhi adale romance ngoba wenza ukuba akhokhe, ngeke nje lokhu iba namandla ukukhangana, kodwa yena bazokubona for the strong, umuntu wesilisa wena.
Ngakho ngithi ningakhathazeki ngokuba ubudala usuphelelwe - ake umelele Chivalry, romance and passion. Kungani hhayi nje ahlale emuva futhi ukujabulela ungazenza kowesifazane ngokwenza le nto hlobo for wakhe, ukuthi uhlose ukuba ngimbone noma cha. Ungakwazi ke zijabulela ubudlelwane ulwazi ukuthi efanele, ukusebenza ngokugcwele futhi umuntu ozimele, ngubani bangakhetha ukwelapha owesifazane, nje ngoba can. Ngaziqhenya.